दीपिकाले छक्का पन्जा ३ लाई नचिनेकै हुन् कि ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsदीपिकाले छक्का पन्जा ३ लाई नचिनेकै हुन् कि ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – छक्का पन्जा ३ को ट्रेलर रिलिज गर्दा मात्र अभिनेत्री दीपिका प्रसाइको उपस्थिती देखियो । दीपिका प्रसाई यो सिनेमाको अरु कुनै पनि प्रमोशनल टुरमा नदेखिनु आफैमा सोचनिय बिषय हो । नेपालमा छक्का पन्जा ब्रान्ड सिनेमा बनिसकेको छ । यो सिनेमा खेल्नका लागि जो कोही हिरोइन पनि लागिपर्छन् ।
तर, दीपिकाले यो सिनेमामा काम गर्दा उनलाई चिठ्ठा नै परेको टिप्पणी सुनिएको हो । तर, सिनेमा रिलिज हुन एक हप्ता नरहँदा दीपिकाले छक्का पन्जाको ब्रान्डलाई चिन्न नसकेकी हुन् कि भन्ने देखिन थालेको छ । सिनेमा छक्का पन्जा ३ को प्रमोशनल गीत बनेको छ । यो गीतमा पनि दीपिका देखिइनन् ।
सिनेमाको बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन हुन्छ, त्यसमा पनि दीपिका देखिएकी छैनन् । बिहिबार त दिनभर नै यो सिनेमाको राजधानीमा कन्सर्ट नै भयो, तर पनि दीपिका यसमा देखिइनन् ।
सिनेमाकी निर्देशक दीपाश्री निरौला सिनेमाको काम गर्न छाडेर दौडिएकी छिन् ।
अभिनेत्रीको कुनै साइसुई छैन । किन होला ? यसको उत्तर यसका निर्माताहरु अहिले दिन चाहदैनन् । किनकी, अहिले अभिनेत्रीको बारेमा बोलेर उनीहरु नकारात्मक टिप्पणी नै होस् भन्ने चाहदैनन् ।
छक्का पन्जा ३ जस्तो ब्रान्ड बोकेको सिनेमाको प्रचारमा नहिड्नु, आफ्नो उपस्थिती कमजोर बनाउनु के दीपिकाका लागि घाटाको कुरा होइन होला र ?
तर, आन्तरिक कुरा के हो थाहा भएन ? दीपिकाले ऐश्वर्य सिनेमा खेलेपछि नै आफूलाई सिनेमामा रुची भएर नआएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
छक्का पन्जा ३ का निर्मातासँग उनको आन्तरिक असन्तुष्टी छ कि के हो ? अभिनेत्री प्रचारमा हिड्दा फाइदा उनलाई नै हो । तर, दीपिकाले छक्का पन्जा ३ चिन्न नसकेको चर्चा हुन थालेको छ । घटस्थापनाको दिनबाट यो सिनेमा रिलिज हुँदैछ ।
यसरी मनाइन परमिताले आफ्नो २५ औ जन्मदिन, हेर्नुहोस् फोटो फिचर